Xawaaladda Amal oo sheegtay amarkii bangiga Franklin ee xiritaanka akoonnada xawaaladaha Soomaalida in aysan wax saamayn ah ku yeelan doonin adeegyada xawaaladeed. – Radio Daljir
Dubai, Dec 03 – Iyadoo dhawaan bangiga Maraykanka ah oo lagu magacaabo Franklin kuna yaalla Magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota uu ku dhawaaqay in uu gabi ahaanba joojin doono xiriirkii ganacsi ee uu la wadaagay xawaaladaha Soomaalida ee gobolkaasi ku yaalla, ayaa haddana qaar ka mid ah maamulka shirkadahaasi xawaaladeed ay tilmaameen in aysan taasi wax saamayn ah ku yeelan doono adeeggoodii ganacsi iyo noloshada ummadda Soomaaliyeed toona.
Cabdidaahir Cali Xirsi, oo ah maareeyaha guud ee shirkadda xawaaladda ee Amal ayaa sheegay in ay tahay wax caadi ah nidaamka accoun-xiridda ee uu ku dhawaaqay bangiga Franklin, aysan waxba u dhimaynin hawlahoodii shaqo iyo adeeggii lacag dirid iyo dhigasho ee ay u qaban jireen Soomaalida iyo dadweynaha kale ee ay caalamka xiriirka kala wadaagaan.
“Haddii ay dhacdo in la xiro accounnadii aan ku lahayn bangiga Franklin oo uu dhaqan-galo amarka mas’uuliyiinta bangigaasi ay soo saareen, waan sii wadaynaa adeegyadii shaqo, waxaana xisaabaadkayaha u wareejin doonnaa bangiyo kale oo isla Maraykanka ah haddana ay nooga furan yihiin accounno-xisaabeed” ayuu yiri maamulaha guud ee Amal Express.
Maareeyuhu, waxaa kaloo uu Radio Daljir u sheegay waddanka Maraykanka in ay ka jiraan in ka badan 50 bangi, midka haatan ku dhawaaqay xiridda accounnada xisabeed ee xawaaladaha Soomaaliduna uu ka mid yahay kuwa ugu baaxadda yar marka laga hadlayo gobollada uu ku yaallo iyo heerkiisa macaamil, taasina aysan dhib iyo dhabar-jab midna ku keeni doonin dhaqaalaha dalka iyo dhaq-dhaqaaqoodii hawleed midna.
Todobaadkii hore ayey ahayd markii mas?uuliyiinta bangigaasi ay ku goodiyeen in ay xiri doonaan 15-ka bishaan December dhammaanba accounnadii xawaaladaha Soomaalidu ay ku lahaayeen bangigaasi, taasoo loo aanaynayo qirashadii gabar Soomaaliyeed oo lagu maxkamadeeyey Maraykanka ay qiratay rag Al-shabaab ah in ay lacago uga dirtay Maraykanka iyadoo la adeegsanayey xawaalaha Soomaalida, inkastoo maamullada xawaaladaha Soomaaliduna ay tilmaameen in aysan meesha ka marnayn loolan-ganacsi iyo is-xijin-dhaqaale.
Xiritaanka accounnada xawaaladaha Soomaalida ee gobolka Minnesota ayaa abuurtay walwal iyo cabsi la xiriirta arrintaasi in ay saamayn ku yeelato noloshada kumanaan qoys oo Soomaali ah oo ku tiirsan biilashada lacageed ee eheladooda bannaanku u soo diraan iyo sidoo kaleeto dhaqaalaha guud ee dalka oo qiyaastii la tilmaamo Maraykanka in ay ka soo xaroodaan adduun dhan hal bilyan oo dollar sannadkasta.